प्रभावकारी बन्दै ‘लिच थेरापी’ « Lokpath
२०७७, १५ पुष बुधबार १६:५२
प्रभावकारी बन्दै ‘लिच थेरापी’
प्रकाशित मिति : २०७७, १५ पुष बुधबार १६:५२
तनहुँ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तनहुँमा जुकाको चुसाइ ‘लिच थेरापी’ माध्यमबाट समेत बिरामीको उपचार गर्न थालिएको छ ।
केन्द्रका प्रमुख डा.रामप्रबोध मण्डल सरुवा भएर आएको केही समयपश्चात् उक्त पद्धतिबाट बिरामीको उपचार गर्न थालिएको हो । छाला, युरिक एसिड, टाउकाको रौँ झरेका, अनुहारमा डण्डीफोर आएका, पुराना दाद, पायल्सलगायत केही जटिल रोगका बिरामीको उपचार निको भइसकेको कार्यालयका वरिष्ठ कविराज निरीक्षक एवम् सूचना अधिकारी बलभद्र वाग्लेले बताएका छन् ।
दिनमा एकपटक तीन दिन जुकालाई चुसाउँदा छालाको समस्यामा न्यूनीकरण हुँदै गएकाले निको हुनेमा आफूलाई विश्वास लागेको उनले बताए । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा.राम प्रबोध मण्डल गत वर्ष तनहुँमा सरुवा भएर आएको केही समयपछि भारतको मद्रासबाट पाँचवटा जुका तीन हजारका दरले किनेर ल्याएका थिए ।
लिचीथेरापी विधि नेपालमाभन्दा पनि विदेशी मुलुकमा अझ बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए । उक्त पद्धतिबाट निको भएका रोग पुनः बल्झिने सम्भावना कम हुने हुँदा प्रभावकारी देखिएको छ । उपचार विधि प्रभावकारी बन्दै गएपनि यहाँको पानीमा बढी मात्रामा चुन मिसिएको पाइएकाले जुका मर्ने गरेकाले उपचारमा समस्या भएको उनले बताए। “एउटा जुकाले बिरामीको समस्या भएको ठाउँबाट पाँचदेखि दश मिलिलिटर अशुद्ध रगत सेवन गराइन्छ”, उनले भन्नुभयो, “एकजना बिरामीलाई बढीमा सातपटकसम्म रगत चुस्न लगाइन्छ ।”
जुकाको र्‍यालमा एक सयभन्दा बढी यस्ता तत्व हुन्छन् जसले रगतलाई शुद्ध र पातलो बनाउने काम गर्छ । जुकाले जमेको रगत निकालेर सामान्य रक्तसञ्चार हुनसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ । उनले भने, “तन्तु र मासु कुहिन दिँदैन, जुकाले तन्तु प्रवद्र्धनका लागि थप सहयोग गर्छ ।”
एक व्यक्तिमा प्रयोग गरिएको जुका अन्य व्यक्तिमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । उनले भने, “नियमितरुपमा थेरापी गराउनुपर्ने व्यक्तिमा प्रयोग गरिएको जुकालाई पुनः उसकै लागि प्रयोग गर्ने गरी संरक्षित गरेर राख्नुपर्छ ।” एउटा जुकालाई बढीमा आधा घण्टासम्म चुस्न लगाइनेछ । बिरामीको अवस्था हेरी दुईदेखि माथि जुकाको प्रयोग गर्न सकिने डा.मण्डलले बताए ।
वास्तु ज्ञान : सुत्ने कोठामा के सामान राख्ने ? के नराख्ने ?
काठमाडौं – आफू सुत्ने कोठा अर्थात् शयन कक्षमा के – के सामान राख्नुभएको
काठमाडौं – के तपाईको निदाउनेबित्तिकै घुर्ने बानी छ ? वा तपाईको पार्टनरको यस्तो